Musharax Cabdirisaaq Nuur Caluula oo ka tanaasulay inuu u tartamo Arbacada doorashada Puntland – Radio Daljir
Musharax Cabdirisaaq Nuur Caluula oo ka tanaasulay inuu u tartamo Arbacada doorashada Puntland
Janaayo 6, 2014 2:03 b 0
Garoowe, January 6, 2014 – Musharax Cabdirisaaq Nuur Caluula ayaa? maanta ku dhawaaqay inuu si toos ah uga tanaasulay tartanka xilka madaxweynenimo ee Puntland, kaas oo Arbacada soo socota Garoowe ka dhici doona.
Cabdirisaaq Nuur oo si wayn looga dareemay ololihiisa ayaa xusay inuu isagu go?aansaday in uusan tartanka gelin .?waxaan ahaa musharixii ugu da?yaraa, taas waxay muujinaysaa hamiga dhalinyarada.? Ayuu yiri Caluula.
Musharaxa ayaa saxaafada u xaqiijiyey in aanay jirin cid uu isagu u tanaasulay ama cadaadis meel kale kaga yimid, wuxuu si cad u sheegay in uu ka laabtay inuu tartamo Arbacada oo ay dhacayso doorashada jagada madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa.
Musharixiinta ayaa beri la filayaa inay khudbado iyo taariikh nololeedkooda ka hor jeediyaan baarlamanka Puntland, kadib markii shalay guddigu ku dhawaaqay shuruudaha laga rabo musharixiinta u tartamaya jagada madaxweynaha iyo ku xigeenka intaba.
Tarsan ?bixinta aqoonsiga qofka waxay qayb tahay dagaalka ka dhanka ah xubanaha Al-shabaab?